सीमानाका स्थानीय तहको गुनासो : उखुबारीबाट छिरेर क्वारेन्टाइनमा बसेको भत्ता माग्छन्
काठमाडौं, जेठ ९ : कोरोनाभाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारको नीति फितलो हुँदा स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र कोरोना परीक्षणमा समस्या देखिन थालेको छ।
भारतसँग सीमा जोडिएका स्थानीय तहले सीमा पार गर्नेलाई नियन्त्रण गर्नेदेखि उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न समस्या झेल्दै आएका छन्। खुला सीमानाका कारण लुकिछिपी भारतमा रहेका नेपाली गाउँ आउँदा व्यवस्थापनमा समस्या खेप्नुपरेको सर्लाहीको गोडैटा नगरपालिकाका प्रमुख देवेन्द्र कुमार यादव बताउँछन्।
‘केन्द्र र प्रदेश सरकारले केही मतलब राखेको छैन। पारीको नगरपालिका र जिल्ला ठानेका छन् कि!,’ नगर प्रमुख यादवले काठमाडौं प्रेससँग भने, ‘सीमाबाट मानिसहरु आउँछन्, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न कठिन छ। परीक्षण किट र स्वास्थ्यकर्मी समेत छैनन्। सबै व्यवस्था मिलाउन हामीले मात्रै सक्दैनौं। केन्द्र र प्रदेश सरकार मुकदर्शक बनेर बसेका छन्।’
केन्द्र र प्रदेश सरकारले समन्वय गर्नु त परको कुरा कुनै चासो समेत नराखेको सीमावर्ती अधिकांश स्थानीय तहले गुनासो छ। क्वारेन्टाइन निर्माण, त्यसको सुरक्षा, स्वास्थ्यकर्मीको अभाव र संक्रमण पुष्टि भएकाको उपचार गर्न समेत सोर्सफोर्स लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको मेयर यादवको गुनासो छ।
शुक्रबारमात्रै गोडैटा नगरपालिकाका १३ जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको थियो। गोडैटा नगरपालिकमा भारतबाट आएका १ सय २० जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। जसमध्ये अहिलेसम्म ४८ जनाको मात्रै पीसीआरका लागि स्वाब संकलन भएको छ।
‘५६ जनाको रिपोर्ट आउँदा १३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ’ यादवले भने, ‘आवश्यकता अनुसारको संख्यामा परीक्षण नै गर्न सकिएको छैन, अनि कसरी सम्हाल्ने यो अवस्था ?’
सर्लाहीका संक्रमितलाई उपचारका लागि जनकुपरस्थित कोरोना अस्पतालमा पठाउने तयारी भइरहेको छ। तर एम्बुलेन्सले संक्रमितलाई बोक्न नमान्ने गर्दा पनि समस्या थप बढेको छ। ‘एम्बुलेन्सले संक्रमतिलाई लैजान मानेका छैनन्,’ यादवले भने, ‘रेडक्रसका तीन वटा एम्बुलेन्समार्फत आज बल्लतल्ल जनकपुर पठाउने तयारी गरिएको छ।’
१३ जनामा संक्रमण पुष्टि भएपछि प्रदेश नम्बर २ का सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले सर्लाहीमै उपचार गर्नु भनेका थिए। तर, सर्लाहीमा आइसोलेसन वार्ड, आइसीयू र भेन्टिलेटर नै छैन। ‘सामाजिक विकासमन्त्रीले सर्लाहीमै आइसोलेसमा राख्नु भने। मन्त्री भएर यस्तो कुरा गर्ने हो? यहाँ आइसोलेसन र भेन्टिलेटर कहाँबाट ल्याउने?,’ यादवले भने, ‘हाम्रो क्षेत्रका सांसद अमरेशकुमार सिंहलाई मैले भनेपछि उहाँले मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गरेर जनकपुर कोरोना अस्पतालमा लैजाने तयारी भएको छ। उपचार गर्न समेत नेताको सिफारिस चाहिने अवस्था छ, यो भन्दा दुःखको कुरा के होला?’
उखुबारीबाट लुकेर सीमा पार
सर्लाहीको गोडैटा नगरपालिका भारतसँग जोडिएको नगरपालिका हो। यो नगरपालिकाको १२ किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा पर्छ। सीमा क्षेत्रमा उखुबारी छ। उखुबारीमा लुकेर रातको समयमा सीमामा आइपुगेका मानिस नेपाल छिर्ने गरेको यादवको भनाइ छ।
‘खुला सीमामा जति सुरक्षाकर्मी राखेपनि राति उखुबारीबाट मानिसहरु आउँछन्,’ यादव भन्छन्, ‘नेपाल छिरेका कोही सिधँै क्वारेन्टाइनमा आएका छन्। कसैलाई घरबाटै फिर्ता लिएर पाँच वटा क्वारेन्टाइनमा १ सय २० जनालाई राखेका छौं।’
अहिले क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरु भारतको कोरोनाको ‘हटस्पट’ मुम्बईबाट आएका हुन्। उनीहरुको स्वाब संकलन गर्न समेत नगरपालिकालाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ। ‘उत्तरतिरका नगरपालिकाले पीसीआर परीक्षण गरिरहेका छन्। दक्षिणमा भने हाम्रो नगरपालिकामै पहिलो पटक पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन भएको हो,’ यादवले भने, ‘भारतको कोरोना हटस्पटबाट आएकाको स्वाब संकलन सीडीओ साब, समन्वय समितिका प्रमुखसँग अनुरोध गरेर बल्लबल्ल गरेका हौं।’
आरडीटी परीक्षण गर्ने कुरा भएपछि प्रमुख यावदले कि पीसीआर परीक्षण गरौं, होइन भने क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई घर छोडिदिन्छु भनेपछि ८४ जनाको संकलन भएको बताए। ‘आरडीटी गरौं भन्ने थियो। तर, क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरु गम्भीर हुन सक्ने भएकाले कि पीसीआर गरौं कि घर पठाइदिन्छु भनेपछि स्वाब संकलन भयो। आखिर संक्रमित रहेछन्, बेलैमा पत्ता लाग्यो नी,’ उनले भने।
यादवका अनुसार अहिले पनि सीमा क्षेत्रमा दुई सयभन्दा बढी मानिस नेपाल प्रवेशको दाउ खोजेर बसेका छन्। उनीहरु जुनसुकै बेला नेपाल प्रवेश गर्ने सम्भावना छ। सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा गरिएपनि पर्याप्त छैन। ‘बोर्डरमा २०० जनाभन्दा बढी मानिस बसेका छन्। राजस्थानबाट ट्रक, एसी बस रिजर्भ गरेर आएका छन्। कसलाई रोक्नु, कसलाई के गर्नु?,’ उनले भने, ‘फोन गरेर भन्छन्– हामीले भोट हालेको होइन? छिर्न दिनुपर्छ। मुम्बईबाट एउटै ट्रकमा आएका ४० जनामध्ये सात जना संक्रमित भेटिएका छन्।’
नेपालमा नक्सा जारी, सीमामा प्रभाव
पछिल्लो समय भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले नेपालीलाई रातिको समयमा नेपालतर्फ खेद्ने गरेको छ।
‘हाम्रा मानिसलाई एसएबीले राति खेद्न थालेको सुनेको छु,’ मेयर यादवले भने, ‘क्वारेन्टाइनमा आएकाहरुले २२ दिन भइसक्यो तिमीहरुलाई रोग छैन भनेर भगाउने गरेको बताएका छन्। राम्रो खान र सुत्ने व्यवस्था त परको कुरा गालीगलौज गर्ने गरेको गुनासो आएको छ।’
दिनको दुई हजार भत्ता माग्छन्
उसो त क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरुले भक्ता माग्ने, राम्रो खाना चाहिने भन्दै आन्दोलन नै गर्ने गरेका छन्। लकडाउनको पालना गर्नुपर्छ भन्दा स्थानीयले आफूलाई केही नभएको र घाममा बस्दा ठीक हुने भन्दै अटेरी गर्ने गरेको पनि मेयर यादवले सुनाए। ‘बासमतीको चामल देउ, दिनको २ हजार भत्ता देउ, मिनरल वाटर देऊ भनेर आन्दोलन गर्छन्,’ उनले भने, ‘यहाँ जुन चामल र पानी उपलब्ध हुन्छ त्यही खुवाउने हो। सम्झाउँदा मान्दैनन्। सेना र प्रहरीको डर देखाउनुपर्ने हुन्छ।’
भारतबाट आएका क्वारेन्टाइनमा बस्न नमान्दा सेना र प्रहरीको डर देखाउनुपर्ने अवस्था छ। ‘मलाई केही भएको छैन किन जबरजस्ती गरेको। भोट हामीले पनि हालेको हो भन्छन्,’ यादवले भने, ‘भोटसँग के मतलब भयो र? सुरक्षित बस, टेष्ट गराइदिन्छु, नेगेटिभ आयो भने घरमा जानु, पोजेटिभ आयो भने उपचार हुन्छ। घरमा जाने कुरा नगर, जबरजस्ती गरे प्रहरी परिचालन गरेर जेल पठाइदिन्छु भनेर डर देखाउनुपर्ने अवस्था छ।’
राहत वितरणमा समेत अवरोध खेप्नु परेको तितो अनुभव यादवसँग छ। केन्द्र सरकारले १५ लाख रुपैयाँ राहत वितरणका लागि पठाएको उनले बताए। ‘३० लाख विपद् व्यवस्थापनमा राखेका थियौं। केन्द्र सरकारले १५ लाख समेत थपेर अहिलेसम्म ५५ लाखको सामान साढे ६ हजारलाई बाँड्यौं,’ उनले भने, ‘सात लाखको साबुन वितरण गरेका छौं। अब प्रदेशले प्रत्येक वडामा पाँच परिवारलाई बाँ्डन भनेको छ। एउटा वडामा ६ सय जनालाई बाँड्दा त सरकारी राहतमा सबैको हक हुन्छ भनेर अवरोध भयो। अब पाँच परिवारलाई कसरी बाँड्नु।’
नेगेटिभ रिपोर्ट आएकालाई तत्काल घर नपठाइने
यादवले नेगेटिभ रिपोर्ट आएकाहरुलाई तत्कालै घर नपठाउने बताए। ‘कसरी घर पठाउनु, सँगै खैनी खाएका छन्। तास खेलेका छन्,’ उनले भने, ‘मलाई शंका लाग्दैछ। उनीहरु पनि पूर्णरुपमा सुरक्षित छैनन्। बाहिरबाट आएकाहरुले कतिलाई सारेका छन्।’
उनले नगरपालिकाले अहिले पाँच वटा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरेको छ। अब तीन वटा थप्ने योजना बनाएको छ। ‘अब थपिने क्वारेन्टाइनमा १२० जना राख्न सकिन्छ। त्यसपछि भने हाम्रो क्षमताले भ्याउँदैन,’ उनले भने, ‘इलाका प्रहरी कार्यालय छैन। ३ वटा थानामा १५ जना प्रहरी छन्। अप्रयाप्त सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र किटको अभावका कारण थप मानिसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्ने अवस्था छैन।’
Published Date: Friday, 22nd May 2020 2:11:45 pm